Mitsva Border Mitemo yeVashanyi veCanada: 10 US States ichagamuchira maCanada nemaoko maviri
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Mitsva Border Mitemo yeVashanyi veCanada: 10 US States ichagamuchira maCanada nemaoko maviri
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kanada Breaking News • Hurumende Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • LGBTQ • Mexico Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Mexico nevaCanada vanogona kuronga zororo reAmerica kuUnited States. Kubva munaNovember 1, Homeland Security muUS ichavhurazve miganho yepasi pakati pevavakidzani veUS pakufamba kusingakoshe, kusanganisira kushanya.
IWhite House yakasimbisa Chipiri manheru kuti vachengeti vakazara kubva kuCanada vachakwanisa kuenda kuUnited States pakuyambuka muganho wepasi kubva munaNovember 1.
Izvo hazvina kutaurwa kuti ndeapi majekiseni angagamuchirwa kana kana mishonga yakavhenganiswa ichizokodzera.
US Border yevashanyi veMexico ichavhurwa munaNovember 1 futi
Avo vanopa humbowo hwejekiseni uye vari kutarisira kushanyira mhuri kana shamwari dziri kusvika sevashanyi kana vatengi vachabvumidzwa kupinda muUnited States zvakare kubva munaNovember.
Mutungamiri weUS Biden akasimudza kurambidza kwakafanana kune vekunze vaitsvaga kuenda kunyika kubva kumhiri kwemakungwa kusanganisira Europe.
Iko kusimudzwa kumwechete kwezvirambidzo kuchashanda kumiganhu yenyika pakati peUnited States neMexico.
Iyi inhanho yekutambira yekuvhurwa kweInternational US Travel and Tourism Indasitiri.
Denda risati rasvika muna 2019, paive nevashanyi vanosvika mamirioni makumi maviri nemakumi maviri nemaviri kubva kuCanada kuenda kuUnited States.
Vanopfuura mamirioni e4.1.
Vanopfuura mamirioni 3.1 maCanada vanoshanyira New York gore rega rega. Kukwezva kwe # 1 ndeyechokwadi New York City, Rimwe remaguta akakurisa pasirese, New York inogara iri chamupupuri chezviitiko, nenzvimbo dzakakurumbira kwese kwese uye isina nguva yakakwana yekuzviona zvese kusanganisira nzira dzepasirese, yepasi rose kunotenga, iyo Statue yeRusununguko, Empire State Kuvaka, Brooklyn Bridge, Central Park, uye mamuseum mazhinji anozivikanwa epasirese.
Vanopfuura mamirioni maviri nemazana maviri emaCanada vanoshanyira nyika yeWashington gore rega rega nekutyaira nyore kupinda pamuganhu wedunhu reBritish Columbia. Seattle ndiyo gedhi rinoenda kuPacific Northwest region, uko kunoshamisa makomo emakomo anotarisa pamusoro pemasango akasvibira emvura uye anoshamisa mahombekombe. Mapaki maviri emunyika, Mount Rainier neOlympic, anopa kusangana kunoshamisa nezvakasikwa sezvinoita zvitsuwa zveSan Juan zviri pamhenderekedzo.
Vanopfuura mamirioni 1.6 maCanada vanoshanyira California gore rega. Iwo akasimba maguta, mahombekombe, mapaki ekuzvivaraidza, uye zvishamiso zvakasikwa senge hapana kumwe pasi pano zvinoita California nyika inokatyamadza yemikana yevafambi. Iwo masuwo maguta eSan Francisco neLos Angeles anogara kune mamwe masayiti anozivikanwa kwazvo ehurumende, kubva kuGolden Gate Bridge kuenda kuHollywood neDisneyland.
Vanopfuura mamirioni 1.3 maCanada vanoshanyira Nevada gore rega rega, vazhinji vanosvika muLas Vegas. Nzvimbo dzinoshamisa dzeNevada dzinowanzo kuvezwa nekupenya uye kupenya kweguta rayo guru, Las Vegas. Nevada inzvimbo inoshamisa yemasikirwo akasiyana, iine nzvimbo zhinji dzakanaka dzekushanyira, zvinotyaira, uye mikana inoshamisa yezvinhu zvekunze mumapaki avo emunyika uye nzvimbo dzekutandarira.
Vanopfuura mamirioni 1.3 maCanada vanoshanyira Michigan gore rega nevazhinji vafambi vezhizha vanodzika kubva kuOntario. Michigan ndiyo imba inoyevedza inoyevedza, makungwa ane mbiri, chikafu chinonaka, nzvimbo dzinoshamisira uye matombo akavanzika. Iyi inoshamisa nyika inoganhurana 4 yeGreat Lakes uye ine zvinopfuura zviuru gumi nezviviri zvemakungwa mukati, yakapararira munzvimbo dzayo dzepazasi uye dzepamusoro ichiita nzvimbo inopisa yezhizha kune maCanada.
Vanopfuura miriyoni imwe maCanada vanoshanyira Arizona gore rega rega kubva kune vashanyi venguva pfupi kuenda kune refu kwenguva shiri dzechando. Mumoyo weAmerican Maodzanyemba akadziva kumadokero, Arizona yakazadzwa nezvishamiso zvechisikigo, maguta akasimba, uye anofadza madhorobha madiki. Nyika ino ine zvese kubva kuGrand Canyon, matombo matsvuku eSedona, nyika yewaini, makungwa asinganzwisisike, makomo ekukwira makomo, makomo echando echando, zviitiko zvepasirose zvepasi rose uye zvechokwadi mamiriro ekunze anoshamisa.
Vanopfuura mazana masere veCanada vanoshanyira Hawaii gore rega rega. Zvitsuwa zveHawaii zvinozivikanwa nenzvimbo dzadzo dzakakombama dzemakomo, mapopoma emvura, mashizha anotonhora uye mahombekombe ane goridhe, tsvuku, nhema uye kunyange jecha regirini. Iyo gore kutenderera padhuze nemamiriro ekunze akakwana ane mararamiro akanaka ekuzorodza akaita kuti Hawaii ive yakakurumbira yechando kupukunyuka kwevaCanada! Zvitsuwa zvitanhatu zvakasarudzika zvinopa zviitiko zvakasiyana izvo zvinokwezva chero mufambi.
Vanopfuura mazana manomwe emakumi maCanada vanoshanyira Maine gore rega. Anenge munhu mumwe pavanhu vatanhatu vanoshanyira Maine vanobva kuCanada, iine hafu yeavo vanobva Ontario. Nyika yeMaine, yakatumidzwa zita rekuti Vacationland, inopfuura nzvimbo yekuenda, chiitiko chinokutorera mweya. Maine inobatanidza zvese zviri zvechokwadi, zvakasarudzika uye zvakapusa, uye kunakirwa nenzvimbo dzakavhurika-dzakadzika dzematondo akadzika ehurumende uye mahombekombe ane simba.
Vanopfuura 680,000 maCanada vanoshanyira Pennsylvania gore rega. Maguta epennsylvania ePennsylvania uye zvinonakidza zvekunze zvekunze zvinokukoka kuti uongorore zviitiko zvakasiyana siyana. Iwe unogona kuona rakakurumbira Liberty Bell muPhiladelphia, famba mumakwara eakawira Hondo Yemagamba magamba kuGettysburg, kana kunyorovesa imwe tsika kuCarnegie Museums muPittsburgh.